ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ နိုင်ငံခြားသားနည်းပြတွေ များလာတာက Southgate အတွက် အကျိုးရှိစေခဲ့လား
ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ နိုင်ငံခြားသားနည်းပြတွေ များလာတာက Southgate အတွက် အကျိုးရှိစေခဲ့တာလား
10 Jul 2018 . 6:06 PM
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇-၁၈ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲကို ပြန်ကြည့်ရင် ကြီး(၆)ကြီးအသင်းက နည်းပြတွေဟာ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး မဟုတ်တာကို ပရိသတ်တွေ သတိပြုမိမှာပါ။ အင်္ဂလိပ်နည်းပြတွေဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ကြီးကြီးမားမား အောင်မြင်မှုမရဖူးတာကြောင့် ပြည်ပက ထိပ်တန်းနည်းပြတွေ အစားထိုးဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီး ဂွါဒီယိုလာ Guardiola ၊ ပိုချက်တီနို Pochettino ၊ ကွန်တီ Conte ၊ ယာဂင်ကလော့ပ် Jurgen Klopp ၊ မော်ရင်ဟို Mourinho၊ အာစင်ဝင်းဂါး Arsene Wenger တို့ရဲ့ နည်းဗျူဟာ အားပြိုင်မှုတွေနဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂ်က ပရိသတ်တွေကို ပိုမိုဆွဲဆောင်လာခဲ့တယ်။
Tactical Master လို့ သတ်မှတ်ရမယ့် မန်စီးတီးအသင်းနည်းပြ ဂွါဒီယိုလာရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့အတူ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက မန်စီးတီးအသင်း ပရီးမီးယားလိဂ်၊ လိဂ်ဖလားတို့ကို ဆွတ်ခူးခဲ့တာကိုလည်း အားလုံးအသိပါ။ ထူးခြားတာတစ်ခုက ၂၀၁၈ မတိုင်ခင် နောက်ဆုံး ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံနှစ်သင်းဟာ ဂွါဒီယိုလာ နည်းပြအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကလပ်တွေရှိရာ နိုင်ငံတွေဖြစ်နေတာပါပဲ။ ဥပမာ ၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ စပိန်အသင်း ဗိုလ်စွဲတုန်းက ဂွါဒီယိုလာဟာ ဘာစီလိုနာအသင်းကို ကိုင်တွယ်နေတာပါ၊ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ဂျာမနီအသင်း ဗိုလ်စွဲတုန်းကလည်း ဂွါဒီယိုလာဟာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကို ကိုင်တွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အခု ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာရော ဂွါဒီယိုလာရှိနေတဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းက ကမ္ဘာ့ဖလားကို ကိုင်မြှောက်နိုင်မှာလား။
နောက်တစ်ချက်က အင်္ဂလန်အသင်းနည်းပြဆောက်ဂိတ်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ကြီး(၆)ကြီးက ထိပ်သီးနည်းပြတွေရဲ့ ဗျူဟာတွေကြောင့် အင်္ဂလန်အသင်းအတွက် Flexible Formation တွေကို အသုံးပြုနိုင်ခွင့်ရှိနေတာပါ။ လက်ရှိအင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ပွဲထွက်စာရင်းမှာ မန်စီးတီးနဲ့ စပါးအသင်းက ကစားသမားတွေ အများစုပါဝင်နေပြီး နှစ်သင်းစလုံးရဲ့ နည်းပြတွေက တိုက်စစ်အားသန်နည်းပြတွေဖြစ်တာကြောင့် ဒီကစားသမားတွေကတစ်ဆင့် ဆောက်ဂိတ်က ဂွါဒီယိုလာ၊ ပိုချက်တီနိုတို့ရဲ့ နည်းဗျူဟာတွေကို လေ့လာခွင့်ရရှိစေတယ်။
ဆောက်ဂိတ်ဟာ ၂၀၁၈ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက် (၃-၅-၂)ပုံစံကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး ဒီကစားကွက်က ၂၀၁၆-၁၇ ရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားဆွတ်ခူးခဲ့တုန်းက ချယ်လ်ဆီးအသင်းနည်းပြ ကွန်တီ သုံးစွဲခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလန်အသင်းဟာ ခိုင်မာတဲ့နည်းဗျူဟာ၊ ကစားပုံမရှိတာ နှစ်တော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေအတွင်း ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ပြည်ပက ထိပ်သီးနည်းပြတွေ စိုးမိုးလာတာက အင်္ဂလန်အသင်းနည်းပြ ဆောက်ဂိတ်အတွက် အကျိုးဖြစ်စေပြီး ၁၉၆၆ နောက်ပိုင်းဝေးကွာနေတဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုကို ကိုင်မြှောက်နိုင်မလားဆိုတာကတော့ . . . .
ပရီးမီးယားလိဂျမှာ နိုငျငံခွားသားနညျးပွတှေ မြားလာတာက Southgate အတှကျ အကြိုးရှိစခေဲ့တာလား
ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇-၁၈ ရာသီ ပရီးမီးယားလိဂျပွိုငျပှဲကို ပွနျကွညျ့ရငျ ကွီး(၆)ကွီးအသငျးက နညျးပွတှဟော အင်ျဂလိပျလူမြိုး မဟုတျတာကို ပရိသတျတှေ သတိပွုမိမှာပါ။ အင်ျဂလိပျနညျးပွတှဟော ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ကွီးကွီးမားမား အောငျမွငျမှုမရဖူးတာကွောငျ့ ပွညျပက ထိပျတနျးနညျးပွတှေ အစားထိုးဝငျရောကျလာတာဖွဈပွီး ဂှါဒီယိုလာ Guardiola ၊ ပိုခကျြတီနို Pochettino ၊ ကှနျတီ Conte ၊ ယာဂငျကလော့ပျ Jurgen Klopp ၊ မျောရငျဟို Mourinho၊ အာစငျဝငျးဂါး Arsene Wenger တို့ရဲ့ နညျးဗြူဟာ အားပွိုငျမှုတှနေဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂျက ပရိသတျတှကေို ပိုမိုဆှဲဆောငျလာခဲ့တယျ။
Tactical Master လို့ သတျမှတျရမယျ့ မနျစီးတီးအသငျးနညျးပွ ဂှါဒီယိုလာရဲ့ ဦးဆောငျမှုနဲ့အတူ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက မနျစီးတီးအသငျး ပရီးမီးယားလိဂျ၊ လိဂျဖလားတို့ကို ဆှတျခူးခဲ့တာကိုလညျး အားလုံးအသိပါ။ ထူးခွားတာတဈခုက ၂၀၁၈ မတိုငျခငျ နောကျဆုံး ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံနှဈသငျးဟာ ဂှါဒီယိုလာ နညျးပွအဖွဈ ဆောငျရှကျခဲ့တဲ့ကလပျတှရှေိရာ နိုငျငံတှဖွေဈနတောပါပဲ။ ဥပမာ ၂၀၁၀ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ စပိနျအသငျး ဗိုလျစှဲတုနျးက ဂှါဒီယိုလာဟာ ဘာစီလိုနာအသငျးကို ကိုငျတှယျနတောပါ၊ ၂၀၁၄ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာ ဂြာမနီအသငျး ဗိုလျစှဲတုနျးကလညျး ဂှါဒီယိုလာဟာ ဘိုငျယနျမွူးနဈကို ကိုငျတှယျနတောဖွဈပါတယျ။ အခု ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားမှာရော ဂှါဒီယိုလာရှိနတေဲ့ အင်ျဂလနျအသငျးက ကမ်ဘာ့ဖလားကို ကိုငျမွှောကျနိုငျမှာလား။
နောကျတဈခကျြက အင်ျဂလနျအသငျးနညျးပွဆောကျဂိတျဟာ ပရီးမီးယားလိဂျကွီး(၆)ကွီးက ထိပျသီးနညျးပွတှရေဲ့ ဗြူဟာတှကွေောငျ့ အင်ျဂလနျအသငျးအတှကျ Flexible Formation တှကေို အသုံးပွုနိုငျခှငျ့ရှိနတောပါ။ လကျရှိအင်ျဂလနျအသငျးရဲ့ပှဲထှကျစာရငျးမှာ မနျစီးတီးနဲ့ စပါးအသငျးက ကစားသမားတှေ အမြားစုပါဝငျနပွေီး နှဈသငျးစလုံးရဲ့ နညျးပွတှကေ တိုကျစဈအားသနျနညျးပွတှဖွေဈတာကွောငျ့ ဒီကစားသမားတှကေတဈဆငျ့ ဆောကျဂိတျက ဂှါဒီယိုလာ၊ ပိုခကျြတီနိုတို့ရဲ့ နညျးဗြူဟာတှကေို လလေ့ာခှငျ့ရရှိစတေယျ။
ဆောကျဂိတျဟာ ၂၀၁၈ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲတဈလြှောကျ (၃-၅-၂)ပုံစံကို အသုံးပွုခဲ့ပွီး ဒီကစားကှကျက ၂၀၁၆-၁၇ ရာသီမှာ ပရီးမီးယားလိဂျဖလားဆှတျခူးခဲ့တုနျးက ခယျြလျဆီးအသငျးနညျးပွ ကှနျတီ သုံးစှဲခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။ အင်ျဂလနျအသငျးဟာ ခိုငျမာတဲ့နညျးဗြူဟာ၊ ကစားပုံမရှိတာ နှဈတျောတျောကွာခဲ့ပါပွီ။ ဒါပမေဲ့ အခုနောကျပိုငျးနှဈတှအေတှငျး ပရီးမီးယားလိဂျမှာ ပွညျပက ထိပျသီးနညျးပွတှေ စိုးမိုးလာတာက အင်ျဂလနျအသငျးနညျးပွ ဆောကျဂိတျအတှကျ အကြိုးဖွဈစပွေီး ၁၉၆၆ နောကျပိုငျးဝေးကှာနတေဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလားခနျြပီယံဆုကို ကိုငျမွှောကျနိုငျမလားဆိုတာကတော့ . . . .